Nhau - Shandong hofori yakakosha manejimendi indasitiri kudzika iyo shanduko uye yakatarisana nemusika system uye michina yakatanga kuoneka.
Kuti tinyatsoita zvakataurwa neMunyori Mukuru Xi Jinping pamusoro pekugadzirisa uye kusimudzira mabhizinesi ehurumende uye kuvaka Bato, Zvinoenderana nezvinodiwa zvemakore matatu ekuita kweCPC Central Committee, The State Council uye Liaoning Provincial Party. Komiti uye hurumende yepurovhinzi pane shanduko yeSOE, Muna Kurume 2021, Chirongwa cheMakore Matatu Chekuita Kudzamisa Reform yeShandong Giant Pipe Indasitiri (2020-2022) yakagadzirwa, Inosanganisira 118 nhanho dzekugadzirisa, Pakupera kwa2021, Takapedza 99. nhanho dzekuvandudza, Kupedzwa kwe84%, Pamusoro pe70% yegore negore chinangwa chinodiwa neSASAC, Bensteel inosimudzira kudzika kwekuvandudzwa kwemusika, Kuzivazve makumi mashanu akakosha ekugadzirisa mabasa, pari zvino, Padanho reboka, mabasa ekuchinja ekusuma vatengesi vane hunyanzvi. , kushandisa masimba ebhodhi revatungamiriri, kugadzirisa kugadzwa kwemahofisi makuru uye masangano akabatana zvakananga, kugadzwa kwemvumo.tion system, uye kugadzirirwa kweChirongwa cheMakore mashanu eChigumi nemana uye kuvandudza nzira yekushanda inotarisana nemusika zvakapedzwa, mitemo inotsigira kuvandudzwa kwemitemo uye zvinyorwa zvemasangano zvose zvakabudiswa, Reform basa pachikamu chekambani chiri kusimudzirwa. boka rekuvandudza nekusimudzira basa rekusimudzira, kusimbisa dhizaini yepamusoro-soro yehurongwa nekugadzirisa michina, kusimudzira kwakasimba kwehurongwa hwehurumende hwekuvandudza bhizinesi remakore matatu… muna 2021, Shandong Giant yakakosha manejimendi indasitiri yekutsvaga budiriro yakakura nekuramba ichidzika. shanduko, kukwereta kudzoreredza kudzamisa shanduko, yakatarisana nemusika sisitimu uye michina yakatanga kubuda, inosimudzira zvakanyanya simba uye simba remabhizinesi.
Kuti varambe vachikurudzira shanduko yemakambani ehurumende kuti aende kwakadzika uye kwakasimba kongiri "kudhirowa kwekuvaka", Shandong Giant pombi indasitiri yakagadzira shanduko nekusimudzira kushanda boka.Kubva pakagadzwa boka rekushanda, ragara richivandudza kumira kwezvematongerwe enyika, kwakasimbisa kushandiswa kwemabasa, yakatanga kubva pakutsvaga kweasset uye tsvakurudzo yemidzi, yakatarisa pamatambudziko akakurumbira anotarisana nekusimudzirwa kweShandong Giant management industry, yakatora dambudziko-yakatarisana, yakatora hurongwa uye kugadzirisa kwekugadzirisa semutsetse mukuru, uye akadzidza zvakadzama basa rinokosha rekuvandudzwa kwemukati nekunze kweboka.
Dhizaini yakazara, simbisa iyo yepamusoro-yepamusoro dhizaini yekuvandudza masangano.
Kuburikidza nekuongorora uye kutsvakurudza kwakadzokororwa nekukurukurirana, chirongwa che "1 + 2 + N" chekugadzirisa hurongwa uye hurongwa hwekutsigira hunoenderana hwakagamuchirwa pamwe chete nevamiririri vevashandi. Maererano negadziriro yekugadzirira, mahofisi makuru, simbi, masangano makuru emigodhi kugadzirisa uye vashandi vekutonga nhanho yebasa, dzimbahwe, simbi, migodhi ese masangano ekugadzirisa uye manejimendi evashandi vane chinzvimbo, akawanda maindasitiri ekuvandudza hurongwa kusimudzira nhanho, yehurumende bhizinesi rekuvandudza makore matatu chiitiko chekuongorora uye kupedzisa basa danho rekudzika musika shanduko "matanho mashanu", Shandong hofori. pombi indasitiri yekuvandudza uye budiriro boka rinoshanda rinoramba richivandudza kudzimbahwe basa chimiro, kuvaka iyo "4 + 6 + 3" iyi simbi yekudzora chimiro. Panguva imwecheteyo, kambani yakapedzisa kugadziridzwa kwekushanda kwemadhipatimendi gumi nemana edzimbahwe, yakamisa Beiying. uye masangano ekuchengetedza zvicherwa, uye akaisa hurongwa hwekutonga hweplate, Beiying uye mutemo wemigodhivashandi.Kushandwa kwevashandi veShandong Giant pipe indasitiri yemahofisi makuru nemadhipatimendi eplate kwakaderedzwa ne41.3% ne42% zvakateerana.Kuburikidza nemvumo uye kuendesa matunhu, simba nebasa rekubatanidza uye kubvumidza maitiro seShandong Jute Management Co., Ltd., uye Shandong Jute Management Co. ., Ltd. dzakajeka, uye maitiro ekutonga anowedzerwazve.
Nekuvandudzwa kwe "master facory system" senzvimbo yekutanga, kusimudzira vertical classified control uye kuchinjika kunoshanda kurongeka, chigayo chesimbi chekugadzira ndiro, chigayo chinotonhora chinotenderedza uye Beiying Iron kugadzira chigayo zvakavambwa.Izvo zvikamu zvekugadzira zvesimbi uye zviwanikwa zvikamu zvakaderedzwa ne8, zvichiona yakakwirira yepamusoro zviwanikwa